Ny vaovao tsara! - Sword sword sy Crown
HomeNy vaovao tsara!
Ny vaovao tsaran'ny filazantsara!
Andriamanitra dia misy. Mazava izany rehefa hitantsika izao rehetra izao noforonina. Izao rehetra izao dia manana filaharana sy fandaharana mahasoa; avy amin'izany dia azontsika atao ny manondro fa ny Mpamorona izao rehetra izao dia manana faharanitan-tsaina, tanjona ary sitrapo. Amin'ny maha-olombelona an'izao tontolo izao noforonina; amin'ny maha-olombelona antsika, teraka miaraka amin'ny feon'ny fieritreretana isika ary afaka mampihatra ny sitrapontsika. Samy tompon'andraikitra amin'ny Mpamorona isika rehetra.
Naneho ny tenany tamin'ny alàlan'ny teniny hita ao amin'ny Baiboly Andriamanitra. Ny Baiboly dia mitondra ny fahefan'Andriamanitra. Nosoratan'ny mpanoratra 40 ao anatin'ny 1,600 XNUMX taona. Avy ao amin'ny Baiboly dia afaka manatsoaka hevitra isika fa Fanahy Andriamanitra. Velona sy tsy hita maso izy. Samy manana fahatsiarovan-tena sy finiavana izy. Manana talenta, fahaiza-manavaka ary sitrapo izy. Tsy miankina amin'ny zava-drehetra ivelan'ny tenany ihany izy. “Tsy afa-po” izy. Ny fisiany dia miorina amin'ny toetrany; tsy ny sitrapony. Tsy manam-petra izy mifandraika amin'ny fotoana sy ny habaka. Ny habaka voafetra rehetra dia miankina aminy. Mandrakizay izy. (Thiessen 75-78) Andriamanitra tsy manam-paharoa - manatrika eo amin'ny toerana rehetra. Mahagaga izy - tsy manam-petra amin'ny fahalalana. Fantany tsara ny zava-drehetra. Izy dia mahery - mahery daholo. Ny sitrapony dia voafetra amin'ny maha-izy azy. Tsy afaka mijery sitraka amin'ny ratsy Andriamanitra. Tsy afaka mandà ny tenany Izy. Tsy mahay mandainga Andriamanitra. Tsy mety maka fanahy izy, na alaim-panahy hanota. Tsy miova Andriamanitra. Tsy miova amin'ny toetrany, toetra, fahatsiarovan-tena, ary ny sitrapony izy. (Thiessen 80-83) Masina Andriamanitra. Izy dia misaraka ary misandratra ambonin'ny zavaboariny rehetra. Izy dia manasaraka amin'ny ratsy sy ny ratsy rehetra. Marina sy marina Andriamanitra. Be fitiavana Andriamanitra, miantra, mamindra fo, ary manome hatsaram-po. Andriamanitra dia fahamarinana. Ny fahalalany, ny fanambarana ary ny fisoloany mandrakizay dia mifanaraka amin'ny zava-misy. Izy no loharanon'ny fahamarinana rehetra. (Thiessen 84-87)
Masina Andriamanitra, ary misy fisarahana (hantsana na hantsana) manelanelana Izy sy ny olona. Ny olombelona dia nateraka natiora ota. Teraka tamin'ny fanamelohana ho faty isika ara-batana sy ara-panahy. Andriamanitra tsy afaka manatona ny olombelona mpanota. Tonga Jesosy Kristy ary tonga mpanelanelana tamin'Andriamanitra sy ny olona. Diniho ireto teny manaraka ireto izay nosoratan'ny apostoly Paoly ho an'ny Romana: “Koa rehefa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nahitantsika antsika koa amin'ny finoana ho amin'ity fahasoavana itoerantsika ity, ary mifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa isika koa dia manome voninahitra ny fahoriana, satria mahalala fa ny fahoriana dia miteraka; ary ny fikirizana, ny toetra; ary ny toetra, fanantenana. Ankehitriny, ny fanantenana dia tsy mandiso fanantenana, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia narotsaka tao am-pontsika tamin'ny Fanahy Masina, izay nomena antsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin'ny fotoana voatondro ho an'ny ratsy fanahy. Fa zara raha ho an'ny olona marina ny olona iray; kanefa angamba ho an'ny lehilahy tsara iray dia hisy ihany ny sahy maty. Fa Andriamanitra maneho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Ary amin'izany, rehefa nohamarinin'ny ràny isika, dia hovonjena amin'ny alalany. ” (Romana 5: 1-9)
Thiessen, Henry Clarence. Vakiteny amin'ny teolojika momba ny rafitra. Grand Rapids: Eerdmans, 1979.